पादका ७ रोचक तथ्यहरु ! जुन सुनेर तपाई अचम्ममा पर्नुहुनेछ….. «
पादका ७ रोचक तथ्यहरु ! जुन सुनेर तपाई अचम्ममा पर्नुहुनेछ…..
प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०७६, बिहीबार ००:११
एजेन्सी, पेटभित्र पाचन क्रियाको दौरान ग्यास उत्पन्न हुन्छ । त्यो ग्यास कहिले मुखबाट त कहिले मलद्धारबाट बाहिर निस्किन्छ । एक जना व्यक्तिले दिनमा औषतमा १४ पटक पाद्छ। धेरैपटक कुनै आवाज बिना नै पाद उत्सर्जन हुन्छ । पाद स्वास्थ्यको लागि फाईदाजनक मानिन्छ । पादका केहि रोचक तथ्यहरु यस्ता छन्: १. पाद एक प्रज्वलनशील पदार्थ हो । यदी हामीले पादेको बेला आगो बाल्यो पाद पनि बल्छ ।
२. नुहाएको बेला पादेको पाद सबैभन्दा धेरै गनाउने गर्छ । ३. पाद्नु स्वास्थ्यको लागि फाईदा जनक मानिन्छ, किनकि यसले ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । ४. पाद रोक्ने बानि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक साबित हुन सक्छ । पाद रोक्दा पादमा हुने ग्यास टाउकोमा जान सक्ने र टाउको दुख्ने समस्या आउन सक्छ । ५. एकजना मानिसले दिनमा करिब १४ पटक पादने गर्छ भने जीवन भरमा करिब ४,०२,००० चोटी पादने गर्दछ । ६. हाम्रो पादमा हुने १ प्रतिशत हाइड्रोजन सल्फाईडले गर्दा हाम्रो पाद गनाउने गर्छ । ७. मान्छे मरिसकेको ३ घण्टा पछि सम्म पनि पाद आईराखेको हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः केही दिनमै काखी,कुइना,गर्धन अथवा शरीरमा देखिएको कालोपना हटाउने उपाय ! जानी राखौ ‍- हामी सबैलाई आफ्नो सौन्दर्य कायम राख्न मन पर्छ। कहिले काही हाम्रो गर्धन वा शरीरका विभिन्न भागमा देखिएको कालोपनाले हामीलाई चिन्तित समेत बनाउछ। खास गरेर गर्धन वा कुईना जस्ता भागमा कालोपना आउने गर्दछ। आज हामीले तपाईको शरीरमा देखिएको कालोपना हटाएर सौन्दर्य फर्काउने विधिन्न उपायका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ।
बनाउने विधि – कागती एउटा कागतीलाई गोलो तरिकाले ५ टुक्रा गरेर काटनुहोस्। त्यसपछि आधा कचौँरा दुध लिनुहोस्। त्यसपछि अघि काटेको कागतीलाई दुधमा डुबाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईले बेकिंग सोडा लिनुहोस्। त्यसपछि आधाचम्चा भन्दा कम बेकिंग सोडा उकत दुध र कागतीमा राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले त्यसलाई राम्रोसँग पिट्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले उक्त दुधलाई करिब २० मिनेट छोडिदिनुहोस्।
अनुहारको दाग हटाउने २० तरिका –दुई चम्चा जौको धूलोमा कागतीको रस मिसाई पेस्ट बनाएर दाग भएको ठाउँमा लगाउने गर्नुपर्छ । –कागतीको रसमा ब्लिचिङ गुण हुन्छ । यसले कालो धब्बा हटाउन मद्दत गर्छ । यसका लागि कागती काटेर अनुहारमा दल्ने र केही समय त्यसै छोडी मनतातो पानीले धुने गर्नुपर्छ । –दूधमा ल्याक्टिक एसिड पाइन्छ । काँचो दूधमा कपास डुबाई अनुहारमा बिस्तारै दल्ने र केही समय त्यसै छोडेर सुकेपछि मनतातो पानीले धुने गर्नुपर्छ । –घ्यूकुमारीमा छालासम्बन्धी अनेक समस्या समाधान गर्ने गुण हुन्छ । यसका लागि अनुहारमा घ्यूकुमारी दलेर सुक्न दिई धुने गर्नुपर्छ । यसले छालालाई म्वइस्चराइज गर्न पनि मद्दत पु¥याउँछ ।
–बदामलाई रातभरि भिजाउने र बिहान उठी यसको पेस्ट बनाई यसमा चन्दनको पाउडर मिसाएर बनाएको पेस्ट अनुहारमा दल्ने गर्नाले अनुहारका दाग बिस्तारै हराउँदै जान्छन् । –आलुलाई स्लाइस पारी काट्ने । यसलाई दाग भएको ठाउँमा दली सुक्न दिने र मनतातो पानीले धुने गर्नाले दाग हराउँदै जान्छ । –आलुको पेस्ट बनाई यसमा मह मिसाएर अनुहारमा दली केही समय त्यसै छोडेर धुने गर्नाले अनुहारको दाग हराउँछ । –बेसारमा काँचो दूध र कागतीको रस मिसाई दाग भएको ठाउँमा लगाएर केही मिनेट त्यसै छोडी मनतातो पानीले पखाल्नुपर्छ । –पाकेको मेवाको भित्री भागलाई अनुहारमा दलेर २० मिनेटपछि पखाल्ने गर्नाले अनुहारको दाग हराउँदै जानुका साथै अनुहार चम्किलो बन्दै जान्छ ।
–प्याजको रसले कटनको टुक्रा भिजाई दाग भएको ठाउँमा दल्ने र केही समयपछि धुने गर्नुपर्छ । साथै, एक चम्चा प्याजको रसमा दुई चम्चा मह मिसाई अनुहारमा दलेर २० मिनेटपछि पखाल्ने गर्नाले दाग हराउँदै जान्छ । –भुइँकटहरको जुसमा कपास डुबाई अनुहारमा दल्ने र २० मिनेटपछि पखाल्ने गर्नाले दाग हराउँदै जान्छ । –ओखरलाई कुटेर त्यसमा दही र केही थोपा बदामको तेल हाल्नुहोस् । यसलाई अनुहारमा लगाउनुहोस् । यसले छालामा चमक ल्याउँछ । –तपाईंको छाला एकदमै तैलीय छ भने अन्डा र गहुँको पिठोको प्याक लगाउनुहोस् । यसले छालाको तेललाई नियन्त्रण गर्छ । –हरेक रात सुत्नुअघि अनुहारमा जैतुनको तेल लगाउनुस् । यसले अनुहारलाई नरम बनाउँछ । यसले छालामा जमेको कालो दाग कम गर्न पनि मद्दत पु¥याउँछ ।
–केरा, मौसम, अन्डाको प्याकले अनुहारमा भएका दागहरू हटाउन मद्दत गर्छ । –गोलभेँडा, कागती र अन्डाको प्याक लगाउनाले डन्डीफोर, कालो धब्बा हट्नुका साथै छालामा चमक पनि आउँछ । –गोलभेँडा, कागती र महको प्याक लगाउनाले अनुहार चम्किलो हुन्छ । –घामले डढेर कालो भएको छालामा काँचो दूधले मसाज गर्दा फाइदा हुन्छ । –खैरो चिनी, कागती र नरिवलको तेल मिसाई मसाज गर्नाले सनबर्नको असर कम गर्न सकिन्छ । –काँक्रोको पेस्ट, मुल्तानी माटो र रोज वाटरको प्याक बनाएर लगाउँदा अनुहारमा चमक आउँछ । —एक चम्चा नुनमा आधा चम्चा खाने सोडा र एक चम्चा मह राखेर घोल्ने र त्यसले अनुहारमा मसाज गर्ने यसबाट पनि अनुहारको छालामा चमक आउँछ ।